20 minamato Pfungwa dzekununurwa Kubva muupombwe | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero 20 minamato Pfungwa dzekununurwa Kubva muupombwe
1 VAKorinde 6:18: Tizai hupombwe. Chivi chose munhu chaanoita chiri kunze kwemuviri; asi uyo anoita hupombwe anotadzira muviri wake.
Upombwe Kuita zvepabonde nevanhu vanoita zvepabonde kunovhiringidza nemaune kuita hukama nemuchato. Mamiriro ezvinhu apo murume kana mukadzi anobuda kunze kwemhiko dzewanano kuti achengetane murume kana mukadzi nemumwe wake. Rugwaro rwakamboparidzira kupesana nekuita hupombwe. Mubhuku ra1vaKorinde 6: 18-20 Bhaibheri rinoti, iye anovenga chitadzo pamusoro pomuviri wake nekuti muviri wedu ndiyo tembere yaMwari mupenyu. Nhasi tichave tichiita minamato yekununurwa kubva paupombwe.
Varume nevakadzi vakaroora vakati wandei vanobatwa vachiita hupombwe, vakaedza nzira dzakawanda kana nzira dzekusununguka asi vanoramba vachikundikana nekuti idambudziko remweya. Vazhinji vakaroora vanofira vakanyarara, havagone kutaura nekuda kwekutya kutukwa nevanhu. Ipo, kunyangwe avo vanokurumidza kupa mhosva kune vamwe vanobatwawo mune iyo nyonganiso zvakare.
Kuita kwehupombwe kuri kwechidhimoni, vanhu vazhinji vari kukurumidza kusvika pakupindwa muropa neupombwe, havagone kutsanangura kuti sei kana nguva yavakapinda mazviri, asi chavanongoziva ndechekuti ivo vasina simba mukurwisa miyedzo yehupombwe.
Zvichakadaro, ndine chidimbu chemashoko akanaka kwauri nhasi, kungave wanga uri pachiitiko kwenguva yakareba kana kuti unongopinda mazviri. Munamato inzira yekubuda mairi, Mwari vari kuda kukuponesa kubva kune zvakashata, Iye anokupa simba rekukunda miedzo chero painomuka zvakare. Asi tisati tapinda munamato yekununurwa, ngatimboonai matanho ekudzivisa upombwe.
Matanho mashanu Ekutiza Kuita Upombwe
1. Tendeuka: Kupfidza kunoreva kubvuma zvaunokanganisa uye kuita sarudzo kuti utende kurudyi. Shanduko isingaperi inotanga kubva pamoyo, Imo nemoyo unotenda uye unopfidza. Kana iwe ukabatwa newebhu yeupombwe, nhanho yekutanga kusunungurwa kwako kugamuchira zvivi zvako, uye enda kuna Mwari kukanganwirwa. Hakuna zvivi izvo Goid asingazoregerere, Mwari anovenga hupombwe, asi anoda avo vakabatirirwa mazviri. Kana isu taenda kuna Mwari mukutendeuka, tichibvuma zvivi zvedu, iye akatendeka uye akangwara kutiregerera uye achatinatsa pakusarurama kose.1 Johane 1: 9.
2. Tarisana neMudiwa Wako: Chero chipi chausingatarisana nacho, chinoramba chiripo. Iyo nguva yaunotendeuka kubva kuchivi cheupombwe, fonera mumwe wako nekumuudza kuti hauchade kufambidzana naye, vaudze kuti unobvuma zvakaipa zvako uye kuti wagadzirira kuenda nenzira kwayo kubva nhasi . Iri idanho rakashinga kwazvo, uye harisi nyore. Vamwe vatambi havazokusiyei nekuti iwe unovataurira, vamwe vavakaroorana navo vangatosvika pakuedza kukunyadzisa kana kutyisidzira kuparadza imba yako kana ukasazvirega. Asi panguva ino iwe unofanirwa kuve wakasimba muna Ishe, uye uchiramba dhiabhori. Uyezve paunozviwana uri mumamiriro ezvinhu akadai, kungave kuri kwekuchenjera kureurura kumufundisi wako uye kune mumwe wako, nekuita izvi, unowana rutsigiro rwemweya kubva kumufundisi wako, kanganwiro kubva kune mumwe wako uye nerutsigiro kubva kwaari kana iye. Rangarira, tambo yakapetwa mitatu haigone kutyoka.
3. Regedza Kubva Kune Akashata Kambani: Kutaurirana kwakaipa kunoodza tsika dzakanaka, 1 Vakorinte 15:33. Iwe unofanirwa kurega zvachose kusonganirana kusada Mwari uko kunokupinza muchivi choupombwe. Izvi zvinosanganisirawo, kudzivisa nzvimbo dzisina kunaka, uye nharaunda dzezvivi. Semuenzaniso, kana iwe wawana mumwe wako mubhavhu, saka iwe unofanirwa kudzivirira kurembera kunze kwemabhawa. Zvidzore pachako kubva kune chero shamwari yako ichiri muchivi choupombwe.
4. Iva akazvipira kuna Mwari: Iva nemunamato, enda kuchechi yako yemunharaunda nguva dzose, shandira Mwari kubva pamoyo wako, uve mudzidzi weShoko raMwari. Iwe unofanirwa kushuvira izwi ra Mwari, kuti ukure mukutenda. Izwi raMwari rinovandudza pfungwa dzako zuva nezuva, asi minamato ichikupa simba rekuita kuda kwaMwari muhupenyu hwako.
5. Ramba Uchimhanya: Bhaibheri rinotiudza kuti titize zvivi zvebonde, tiza zvinoreva kutiza kubva pakuoneka kweakaipa. Paunenge uchitiza, hausi kutarisa kumashure. Ngwarira kusakodzera kushamwaridzana nevanhukadzi, Semurume akaroora, dzivisa kupa vakadzi vasina murume anosimudza motokari yako. Ndinoziva izvi zvinogona kutaridzika zvakanyanya kune vamwe vedu, asi zvivi zvepombwe zvinotanga nezvinhu zvidiki seizvi. Semufundisi, kana uchipa zano madzimai, chengetedza gonhi rako rakavhurika, kana zvirinani regai mikova yese yehofisi ive mikova yakajeka. Iwe unofanirwa kushandisa nzira yekudzivirira yako kubva paupombwe zvachose. Ndapota kwete, kuti izvi hazvireve kuti iwe unofanirwa kuziva nezve zvivi, kwete, izvo zvinoreva chete kuti iwe uri kudiwa uye unoda kufadza Mwari, zvinoreva zvakare kuti urikuchengeta mwoyo wako uchashanda.
20 SHOKO REMUNYENGETERO UNOGONESA KUSVIKIRA KUSAUKA
Baba vekudenga, ndinoziva kuti nyama yangu yakandiita kuti ndikutadzise, ​​uye kwauri wega ndakaita chinhu ichi chikuru, nengoni dzako, ndinokumbira kuti undiregerere zvivi zvangu uye ugeze neropa raKristu.
Mambo akarurama, bhaibheri rinoti kunyangwe zvivi zvedu zvakatsvuka kunge tsvuku ivo vanozoitwa vakachena kupfuura chando uye kana zvivi zvedu zvakatsvuka kunge krimu, zvichaitwa zvakachena kupfuura makushe, ndinokumbira kuti muchauya nengoni dzenyu Mwanakomana wangu kuti urangarirwe zvakare, muzita raJesu.
 Baba Vekudenga, ndinouya kwauri nemoyo wakaputsika uye wakapwanyika. Rugwaro rwunoti rakatyoka uye rakapwanyika moyo haungazvidzi, ini ndinokumbira kuti mundipewo Nyasha yekukunda miedzo yeupombwe muzita raJesu.
Baba Vekudenga, ndiri panjodzi yekuita hupombwe ndisina mweya wako nesimba. Nguva zhinji pandinotendeuka mumoyo mangu hadzigare kwenguva refu. Ndinokumbira kuti nesimba rako, utumire mweya wako mutsvene muhupenyu hwangu, mweya wako uyo unogara uchikuchidzira muviri wangu unofa kuti urwise zvivi, Ishe isai mweya iwoyo ugare mandiri
 Ishe, kubudikidza nesimba renyu, ndinoparadza joko roga roga reupombwe rakanyudzwa muropa rangu. Bhaibheri rinotaura kuti nekuzodza joko rese rinogona kuparadzwa. Joko roga roga reupombwe rakandibata rakasungwa muna Jesu.
 Baba veKudenga, ini ndinouya kuzopesana nemadhimoni ega ega murume kana mukadzi akatumwa kubva mugomba regehena kuzoparadza mubatanidzwa wamakagadzwa naMwari. Ini ndinoparadza vakadzi nevakadzi vakadaro nemoto muzita raJesu.
 Ishe, ini ndinorasikirwa nechero cheni dzakandisunga chisungo cheupombwe, Ndinozvityora nemoto wekumusoro-soro, ndinotema sununguko yangu kubva pamusungo weupombwe muzita raJesu
Baba Ishe, rugwaro rwunoti chero munhu ari muna Kristu ava chisikwa chitsva uye zvinhu zvekare zvapfuura. Ishe, apo ini pandinopenha hupenyu hwangu kwauri nhasi tipei simba rekutiza kubva kumararamiro angu ekare nemuzita raJesu.
 Ishe, ini ndinopa hupenyu hwangu hwese kwauri mukuzviisa zvizere, ndinopa mweya wangu, muviri, nemweya kwauri, ndinokumbira kuti utore kuzvidzora muzita raJesu.
Ishe, ndinokuzivisai kusunungurwa kwangu paupombwe muzita raJesu. Ini ndinokumbira kuti mundipewo Nyasha yekuremekedza mhiko dzangu dzekuroora, mukana wekuda mudiwa muzita raJesu.
Ishe Mwari, pfekai kwandiri chizere nhumbi dzese dzaMwari kuti ndidzivise dhiabhori zvizere muzita raJesu. Rugwaro runoti dzivisa dhiabhori uye achatiza, Ishe nhasi, ini ndinotora pandiri nhumbi dzenyu dzose dzokurwa nadzo uye ndinodzivisa hupombwe zvizere muzita raJesu.
Ishe, pakataurwa nezvaJesu ibvi rimwe nerimwe rinofanira kupfugama uye nerimi rwese runoreurura, ini ndinosimbisa masimba angu pamusoro pezvivi zvepabonde nemuzita raJesu. Ini ndinogashira Nyasha dzekuremekedza mhiko dzangu dzekuroora kuti handingatadzi kwauri nekune wangu muviri muzita raJesu.
Ishe, nekuti zvakanyorwa kuti muviri wedu itembere yaMwari mupenyu, saka, hapana chinofanira kusvibisa, ndinonamata kuti muuye muite moyo wangu uve musha wenyu mutsva muzita raJesu.
 Ini ndinokuraira, kuti uchagadzira zvese zvandave nazvo zvako, Ishe, ndinokumbira kuti munditsvage uye nekupfuura uye hupenyu hwangu huve chiratidzo chezita renyu muzita raJesu.
Ini ndinokuraira satan muzita raJesu bvisa maoko ako pamuchato uyu. Imba iyi ndeyaIshe, ini ndinokutumira unorongedza kubva kumubatanidzwa uyu muzita raJesu.
Ishe, tambo yeupombwe imwe neimwe, hupombwe nezvitadzo zvakavezwa naDhiabhori kuti ndiite ndibve pachikamu chakadai, Ndinozviparadza muzita raJesu.
Bhaibheri rinoti regai iye anofunga amire kuchenjerera, kana zvimwe, anowa. Ishe, ini ndinotsvaga kugona kwako kwemweya, izvo zvinouya zvingaitika, handisi kuzowira pasi, ndinokumbira kuti undisunungurewo munaJesu.
 Ishe, ndinokuraira kuti iwe uchavhuna kusvibiswa kwemweya kwese uko kungaite kuti ndidzokere kuzvivi zvangu, ndinovaparadza nehunhu nesimba muzita raJesu.
 Ini ndinogashira kukunda kwangu pahupombwe neropa regwayana, uye harizombondikunda zvakare muzita raJesu.
Tinokutendai, Mambo wekudenga, nerusununguko, tinokutendai ngetani dzamakatyora, tenda nekukunda, zita renyu ngarisimudzwe muzita raJesu.
Previous nyayaMinamato Yezve Kuita Zvepabonde
inoteveraPfungwa dzeMunamato Yekugadzirira Bvunzo
Mavhesi epamusoro emavhesi egumi nezve kurapa chirwere.